Taorian’ny fandevenana an’i Papa Wemba, Ireo zavatra 4 manasongadina ny diany teo amin’ny mozika Afrikanina · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny fandevenana an'i Papa Wemba, Ireo zavatra 4 manasongadina ny diany teo amin'ny mozika Afrikanina
Voadika ny 11 Mey 2016 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Nederlands, Español, Swahili, Français
Papa Wemba Niakan-tsehatra teo amin'ny TV5 Monde CC-BY-20
Namoy ny ainy tamin'ny 24 Aprily 2016 tao Abidjan i Papa Wemba, kintan'ny mozika Afrikanina rehefa safotra nandritra ny fampisehoana nataony. Iray amin'ireo mpanakanto nampiroborobo ny rumba Kongoley teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ary nampiofana mpanakanto maro hafa tao amin'ny kaontinanta ihany koa, tahaka an'i Olomidé sy King Kester Emeneya. Navoaka ny didy fisaonam-pirenena mandritra ny telo andro noho ny fahafatesany ary notontosaina tamin'ny 4 Mai 2016 tao amin'ny Katedraly Notre-Dame ao Congo Kinshasa ny fandevenam-pirenena izay natrehan'ny olona arivo mahery. Lahatsarin'ny fandevenana:
Raha tsy lazaina intsony ny lazany eo anivon'ireo mpankafy ny mozika Afrikanina, mbola vitsy kosa ny mahafantatra azy ivelan'ny Afrika. Raha izao ianao vao mahafantatra ity andrarezin'ny kaontinanta Afrikana ity, ireto ny zavatra efatra manasongadina ny fahombiazany.
1. Fanaovana ny mozika haharitra
Fantatra ho mpanjakan'ny rumba Kongoley i Papa Wemba. Saingy karazana mozika mivoatra mandrakizay ny rumba Kongoley izay niteraka endrika mozika hafa tahaka ny Soukous sy ny Ndombolo. Ny rumba Kongoley, araka ny anarany, dia nalaina avy amin'ny rumba Kiobàna izay tonga tao Congo tamin'ny taona 1930s. Ity ny lahatsarin'ny fandaharana Africanités tao amin'ny TV5 Monde izay mampiseho ny tantaran'ity mozika ity miaraka amin'ny sombin-kira nosafidiana:
Marobe ny fandraisan'anjaran'i Papa Wemba sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny taona 70 tamin'ny fivoaran'ny rumba Kongoley; na dia izany aza, ny nanamarika ity vanim-potoana ity dia ny fampiasana betsaka ireo amponga-tapaka ka adino kokoa ireo fitaovana mampiasa ny rivotra (toy ny sodina sy ny trompetra) sy ny gadona voasintona kokoa, manafangaro ny zava-misy ao an-toerana amin'ny zava-misy Kiobàna momba ny rumba.
2. Ny fitsidihana tao Amerika sy Eoropa niaraka tamin'i Peter Gabriel
Tamin'ny taona 1993, nanao fitetezana an'i Amerika Avaratra sy tao Eoropa niaraka tamin'i Peter Gabriel i Papa Wemba tamin'ny fitetezam-pirenena nataon'ny fitetezana “Secret World Live”. Nalaza tamin'ny dokambarotry ny mozika i Peter Gabriel tamin'izany ary nanampy tamin'ny fampahafantarana an'i Papa Wemba manerantany. Ity ny lahatsary misy azy roa lahy miaka-tsehatra mihira ny “in Your Eyes”. (Papa Wemba mihira amin'ny teny Lingala teo amin'ny 7:40):
Fantatra amin'ny sanganasany ara-mozika ihany koa i Peter Gabriel sy ny fikatrohany amin'ny zon'olombelona, indrindra amin'ny alalan'ny fikambanana noforoniny WITNESS. Nanatrika ny fandevenana an'i Papa Wenda i Peter Gabriel saingy tao anatin'ny mangingina tanteraka.
Dikasarin'efijerin'ny fandaharahana Taratata misy ny antsafa nataon'i Nagui tamin'i Papa Wemba sy i Peter Gabriel
3. Hira tsy lefin'ny fotoana
Tao anatin'ny 40 taona nihirana, nandrakitra hira nahita fahombiazana maro dia maro i Papa Wemba. Indro ny tsonga tamin'ireo hirany fantadaza ireo:
Fa fantatra tamin'ny famolavolana sy fiarahana miasa amin'ireo kintana afrikana maro ihany koa i Papa Wemba toa an'i Koffi Olomide, indrindra fa tamin'ny hira Wake Up:
Miaraka amin'i Extra Musica tamin'ny Etat Major:
4. Fiantraika ara-kolontsaina mihoatra ny hira
Nanangana ny hetsika antsoina hoe SAPE izay fanafohezana ny “Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes” (dika teny malagasy hoe fikambanan'ny mpanafana lanonana sy mahay mihaingo) i Papa Wemba nandritra ny taompolo 70. Avy amin'izany no nahatonga ny fomba fitenenana (teny frantsay) hoe “sapé” (tenin-jatovon'ny hoe tsara fiakanjo amin'ny fomba flashy). Tia nanao fiakanjo marevaka sy manaitra i Papa Wemba ary fantatra eo amin'ny tontolon'asany ho Mpanjakan'i Sape. Congo moa ankehitriny dia fantatra ho firenen'ny sappe ary tsy vahiny amin'ny nahatonga izany anarana izany i Papa Wemba. Ny lahatsary manaraka no manome antsipirihan'ny fiandohan'ity anaram-bositra ity, ny “Roi de la Sape” (Mpanjakan'ny Sape) :
Nandao antsika izany i Papa Wemba, mpitari-dalan'ny Rumba Kongoley sady mpanjakan'ny sappe, miteny aminao izahay: “Salut L’ Artiste et Merci” (Arahaba ry Artista ary Mankasitraka).